Basa - nhau dzebasa | Ehupfumi Zvemari
Nhau dzese nezvake basa uye kushaya mabasa. Muchikamu chino iwe unozogona kuramba uchienderana nezvose shanduko zvemitemo zvinoitika padanho revashandi. Isu tinokuzivisawo nezve chikuru ongororo yebasa uye kushaya mabasa muSpain neEurope.
Employment yagara iri imwe yenyaya dzinonyanya kunetsa vagari, muchikamu chino chewebhu tinokupa iwe ruzivo rwese rwakakodzera kuti ugare uchiziva nezvose nhau nenhau dzekufarira mune chiyero chevashandi.
Kana ndine mabasa maviri, ndinobhadhara kaviri here?
kubudikidza Encarni Arcoya inoita 3 mwedzi .
Zviri kuramba zvichiwanda kusava nebasa rimwe chete, asi maviri. Kusachengeteka kwebasa uye chokwadi chekuti…
SEPE inotora nguva yakareba sei kupindura pre-application
kubudikidza Encarni Arcoya inoita 4 mwedzi .
Paunorasikirwa nebasa rako asi iwe uchiziva kuti uchakwanisa kutora mabhenefiti ekurovha, unenge wakasununguka. Asi,…
Ko ERTE quote yekurovha?
kubudikidza Claudi casals inoita 4 mwedzi .
Kubva pakaitika dambudziko guru reCOVID muna 2020, inonzi ERTES yave yakakosha mu…
Nzira yekuunganidza zororo rakabhadharwa uye risina kushandiswa
kubudikidza Encarni Arcoya inoita 5 mwedzi .
Paunenge uchishanda nechibvumirano, unoziva kuti, nemutemo, une kodzero yekutevedzana kwemazuva ezororo. Nekudaro,…
Nguva yekuedzwa muchibvumirano chisingaperi: Chii, chinotora nguva yakareba sei, chii chinoitika kana ukadzingwa.
Kuwana basa kurota kwevanhu vazhinji, kunyanya kana panzvimbo yechibvumirano chenguva pfupi vanokupa…
Mari yekuwedzera muzhizha inotorwa riini?
Imwe yemabhenefiti makuru ekuva nekondirakiti uye kuve mushandi ndeyekuti haugashire yako…
Chii chinonzi chikamu chekurega basa kune vanozvishandira
Vanozvishandira vane zvimwe zvakanakira kupfuura vashandi vanoshanda. Asi zvakare akawanda akashata uye pamudyandigere yaive imwe…
Chii chinonzi kumiswa kwebasa nemuhoro
Chimwe chezvombo izvo kambani inofanirwa "kudzora" vashandi vayo uye kuvadzivirira kubva pakuburitsa mamiriro ...
Maitiro ekusimbisa hurovha online nhanho nhanho
Kuziva nzira yekusimbisa iyo Internet kusashanda nhanho nhanho hakuna kuoma. Kunyangwe paine system ...
kubudikidza Encarni Arcoya inoita 8 mwedzi .
Chinodiwa nemushandi wese kuchengetedza basa rake. Nekudaro, pane dzimwe nguva apo, kune zvimwe ...
Chii chinonzi freelance
Chokwadi kanopfuura kamwe iwe wakanzwa izwi rekuti freelance. Muchokwadi, tinogona kutaura kuti ndiyo fashoni ikozvino ...
Ndeipi nhamba yangu yekuchengetedzeka munharaunda uye maitiro ekuti uwane duplicate
Sangano rekubatana kwesimbi muSpain
Maitiro ekusimbisa stereki uye nhanho dzayo dzose kuti utevera
Chii chinonzi muhoro wemvura